nkà n'ime Spotify adịchaghị android
Part 1.How ibudata Spotify adịchaghị android ngwa maka smart ekwentị ma ọ bụ mbadamba
Part 2.PartHow dozie ya mgbe Spotify adịchaghị android-adịghị arụ ọrụ
Ka ọ bụla ọzọ ụlọ ọrụ Spotify bụkwa mgbe ndị kasị mma n'elu ikpo okwu na mgbe nile na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ na ọ na-eji ọtụtụ nde n'ụwa nile ntụgharị Android n'elu ikpo okwu na ga-eme ka n'aka na ụlọ ọrụ emewo weghaara na ahịa na ala na afọ ojuju. The results nwekwara stellar na ngwa download kenyere si Google Play Store bụ-enyocha iji jide n'aka na otú ihe ịga nke ọma a ụlọ ọrụ ahụ bụ na nke a. Ọ na-gwara na onye ọrụ kwesịrị ime ka ojiji nke Ama n'okpuru na-arụpụta.
1. Olee otú ibudata Spotify adịchaghị android ngwa maka smart ekwentị ma ọ bụ mbadamba
A isiokwu pụtara nanị na otú Spotify nwere ike ebudatara site na iji nontraditional ụzọ nke na mmepe ma ọ bụ tech savvy ọrụ etinye na ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere ka a precautionary tụọ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na otu ọkachamara enwere na-enyere na na oge awa nke mkpa na ọ ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ mgbe odụk okwu ndị dị ka ihe ngwa faịlụ ozugbo ebudatara na-mgbe ụfọdụ furu efu n'ime igwe ma ọ bụ ndị downloads nchekwa na Ya mere ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ije ozi site na-esonụ nzọụkwụ na-kwuru n'okpuru ebe a:
1. The Spotify ngwa ngwa bụ ike ibudata na-arụ ọrụ mere:
2. Ozugbo ọ e ebudatara na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na faịlụ a tapped na-ngwa arụnyere:
3. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Spotify ozi akaụntụ na-eji edebanye ma ọ bụ iji jide n'aka na ihe ndekọ na-enweta:
4. The onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na play button na-enwe na-eme ka song play na dotted bọtịnụ na n'elu na-enwe ileputa songs:
2.How dozie ya mgbe Spotify adịchaghị android-adịghị arụ ọrụ
Na-ịdị ukwuu n'okpuru akara n'okpuru bụ iri mbipụta na-ọrụ nke Spotify ihu na ikwu na android n'elu ikpo okwu. The okwu ndị obere na-aba na otu nzọụkwụ mkpebi e nyere iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe odụk hassle nke ogologo usoro na-esonụ.
1. Ngwa slows ala
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mbipụta na ọrụ na-eche ihu na nke a na ọ na-gwara iji jide n'aka na cache nke ngwa na-kpochara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita a nke na Nwela ya ofu n'ime kacha nta kwere omume oge. The ụzọ e soro bụ NchNhr> ngwa> Spotify> doro anya cache na ala:
2. Ngwa na-eme ka noises
Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị njọ mbipụta na onye ọrụ chere ihu na mmekọrita ngwa. Ọ na-gwara iji jide n'aka na ngwa si ụda ngosi bụ gbanyụọ iji jide n'aka na ezi nso ụra bụ ụtọ dị ka ọtụtụ n'ime ndị na-adịghị ahụ nke chiming ada n'abalị:
3. Ngwa esemokwu
Ọ na-gwara iji jide n'aka na ngwa nke na-emegide ndị na-arụ ọrụ nke Spotify-enye a hassle ka onye ọrụ iji jide n'aka na ngwa na-adịghị mee na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-gwara buut ekwentị na mgbake mode na mgbe ahụ ẹkedori ngwa otu otu na ihichapụ emegiderịta otu na ala na afọ ojuju. The ụzọ bụ menu> Google play ụlọ ahịa> m ngwa> arụnyere> uninstall
4. Battery metụtara mbipụta
Ọ na-e kwuru na onye ọrụ na-akawanye kasị manụ na-arụpụta mgbe ọ na-abịa Spotify ojiji na mmekọrita na ndụ batrị na ihe gbasara akwụkwọ mkpesa bụ na batrị na eyi apụ. Iji mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri onye ọrụ kwesịrị download a na-akwado ngwa. Na cm batrị bụ ihe kasị mma ngwa na nke a. The ụzọ ọzọ bụ NchNhr> Google Play> Search> cm batrị> wụnye.
5. Oyi kpọnwụrụ interface
Iji jide n'aka na nke na-tutu amama mgbe ọ na-abịa Spotify ngwa ọ na-gwara iji jide n'aka na ngwa bụ ike kwụsịrị ma nyeere otu ugboro ọzọ na-mbipụta kpebiri. The ụzọ a ga-agbaso bụ NchNhr> ngwa> Spotify> Force Kwụsị> nwee.
6. Njikọta mbipụta
Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke Spotify ngwa ọ ga-jikọọ na internet ma ngwa adịghị na ụfọdụ na-eme n'aka na nke na-kere. The Spotify bụ ọjọọ na-eme n'aka na mobile data bụ ekwekọghị iji jide n'aka na ngwa na-adịghị ejikọrọ. Ọ na-gwara iji jide n'aka na mobile data na agbanyụrụ site eji ala na ngosi ebe na mgbe ahụ na ịpị data ojiji na-atụgharị ya anya:
7. syncing mbipụta
Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị zutere okwu na nke a na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Wi-Fi na agbanyụrụ na na nke a iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri. The ụzọ bụ Ntọala> Network> Wi-Fi anya na mgbe ahụ na :,
8. Ngwa okuku
Ọ bụghị a ugboro ugboro nke ma ka a ezi ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na-eche ihu ya. Ọ na-gwara iji jide n'aka na cache nke ngwa na-kpochara ina-arụ ọrụ mere. NchNhr> ngwa> Spotify> doro anya cache na ala bụ ụzọ a ga-agbaso:
9. egeghị Ntị ihuenyo
Ọ bụkwa otu n'ime mbipụta na-ọrụ nke Spotify ihu. Ọ na-gwara iji jide n'aka na ngwaike dị ruo akara na ọtụtụ nke Samsung ngwaọrụ ọ nwere ike kwupụtara site na ịpị dị iche ngalaba nke ihuenyo na ọ pụrụ ime nke a site Ịpị * # 7353 na mgbe ahụ na-ahọpụta ndị tsp Grid Mode na ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na onye ọ bụla na ngalaba nke ihuenyo na-enyocha.
10. ekwentị chasiwara
Iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri ọ na-gwara iji jide n'aka na a ọma ọzọ ngwa arụnyere maka CPU jụrụ. Ọ bụ n'ihi na n'ozuzu Spotify ngwa na-arụ ọrụ nọgidere na-eme ka n'aka na songs na-egwu na ọrụ na-pacified otú a batrị ngwa nju oyi dị mkpa. Otu nke kasị mma nwere ụzọ menu> Google play ụlọ ahịa> Search> Clean nna ukwu> wụnye ịrụcha usoro:
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Motorola
Best FLV Players maka Android
> Resource> Android> Iji Nwee maara oru Spotify adịchaghị Android